कोबिद-१९ केबाट सर्छ ? केबाट सर्दैन ? डा. लुना भट्ट, भाइरोलोजिष्ट – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार) ११:३६
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्। मास्क लगाउँदा कसरी लगाउने भनेर हामी होसियार हुनुपर्छ। कसैले हातमा मास्क लगाउने, चिउडोमा लगाउने अथवा कानमा लगाउने गर्छन्, यो एकदमै गलत हो।
जतिखेर पनि साबुन पानी उपलब्ध नहुने भएकाले सेनिटाइजर गोजीमा राखेर हिँड्नुपर्छ। पैसा वा अन्य सामान चलाउँदा सेनिटाइजर दल्नुपर्छ। कहीँ पनि बस्दा सेनिटाइजर भएको टिस्यु पेपरले पुछेर बस्नुपर्छ।
२२ डिग्री तापक्रममा भाइरसको सर्भाइवलबारे गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार काठ र कपडामा २ दिनसम्म भाइरस देखियो। त्यस्तै ग्लास र रुपैयाँको नोटमा ४ दिनसम्म भाइरस देखिएको थियो। सर्जिकल मास्कमा ७ दिनसम्म देखिएको थियो। तर टिस्यु र प्रिटिङ पेपरमा भाइरस देखिएन।
नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी छ त्यसले हामीलाई बचाउँछ भन्ने भ्रम पनि अब तोडिइसकेको छ। कतिपय रोगमा यो क्षमता हुनु राम्रो हो तर यो भाइरसको हकमा यस्तो पाइएको छैन। यो भाइरसको कारणले रोग प्रतिरोधी क्षमता परिवर्तित भएर, धेरै सक्रिय भएर बिरामीलाई असर गरेको पनि देखिएको छ। यो भाइरसको कारणले रोग प्रतिरोधी क्षमताले असामान्य काम गर्ने खतरा हुन्छ। जसले गर्दा हृदयघात, किड्नीलगायत अन्य अंग फेल हुने मस्तिष्कमा समस्या पर्ने, रगत जम्ने र अकस्मात मृत्यु हुनेलगायत खतरा पनि देखिएका छन्।
(२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार) ११:३६ मा प्रकाशित